Isihluku usomatekisi ebulawa ngentululwane - Ilanga News
Home Izindaba Isihluku usomatekisi ebulawa ngentululwane
Isihluku usomatekisi ebulawa ngentululwane
Kuthiwa ubephenya ngomfowabo owanyamalala ekhavwe ngumngani ngezishaqane ezaphuma kumshwalense
BEKUWUMZUZU onzima emalungwini omndeni wakwaFakude ngoLwesibili, ngesikhathi sekuzolandwa isidumbu sikaMnu Mofo Fakude,
odutshulwe wabulawa ngabantu abangaziwa phambi kwezingane zakhe.
ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
NOMFUNDO NGWANE noJOHN HLONGWA
UMNDENI kasomatekisi waKwaNongoma ubaba-za isihluku esesabekayo othi sikhonjiswe yizi-nkabi ezisencane ngokweminyaka, ezidubule zabulala ngentulu-lwane yezinhlamvu eziwu-18 lo somatekisi, esemzini wakhe oseMona, KwaNongoma, phambi kwezingane zakhe ezisencane ngoLwesibili ekuseni.
UMnu Mofo Fakude obenete-kisi ehambela KwaNongoma, ku-thiwa ungenelwe ngabafanyana ababili esemzini wakhe ngezi-thuba zabo-7 ekuseni, bamdubula ngoyaba lwezinhlamvu.
Ngokuthola kweLANGA nge-ndodana kamfowabo omdala kamufi uMnu Linduzulu Fakude, uyise omncane uhlaselwe enezi-ngane kwakhe, inkosikazi isanda kuphuma ilibangise emsebenzini.
“Bengingekho ngesikhathi kwenzeka lokhu kodwa ngithole ukuthi kufike umfana omncane obengazifihlile ebusweni, wacela ukukhuluma nobaba omncane, wathi kunezimpahla zakhe afuna ukuzibheka ekhumbini yakhe ezisale ngayizolo egibele kuyona. Kuthiwa ubaba omncane utshele lo mfana ukuthi kazikho izimpahla ezikhona, wahamba.
“Kuthiwa kube yisikha-shana wabuya umfana esehamba nomunye abalinganayo naye, baphinde bacela ukukhuluma nobaba omncane ezi-nganeni zakhe. Kuthiwa ubaba omncane uphume esethetha ekamelweni, edinwa wukuthi lo mfa-na usebuya okwesibili ezofuna into eyodwa yize ebesemtshelile ukuthi kazikho izimpahla zakhe.
“Kuthiwa ubuze ukuthi bafunani, bangabe besakhuluma, baphendu-la ngezulu lezandla.
“Bamdubule amahla-ndla awu-18 kubuka izi-ngane zakhe. Kuthiwa ababulali bazamile ukubamba ingane yakhe ye-ntombazane eneminyaka ewu-15, kodwa yakwazi ukuphunyuka yabaleka. Ababulali baqede uku-mdubula bashaya bachitha bengathathanga lu-tho kuyena,” kusho uMnu Fakude.
ILANGA lithole ngeli-nye ilungu lomndeni eli-cele ukuba singalidaluli ngenxa yobucayi bodaba, ukuthi umufi ubulawa nje, ubesanda kuhla-selwa ngabantu abanga-ziwa abamdubula esa-ndleni. Kuthiwa uhla-selwa nje, kunecala elibucayi abelivulele um-ngani womfowabo owa-nyamalala, ongaziwa kuze kube yimanje.
Kubikwa ukuthi umfo-wabo kaMnu Fakude, uMnu Koti Fakude, wa-nyamalala eminyakeni edlule wangaziwa ukuthi ushonephi. Kuthiwa umufi usukumele udaba lokunyamalala komfo-wabo ngoba belungamphethe kahle waze wayobheka emnya-ngweni wezasekhaya, wathola ukuthi kuvela kuthi sewashona.
Kuthiwa kuvele ukuthi umu-ntu owamenzela isitifiketi sokufa ngumngani wakhe abamaziyo, abamgagule ngegama. Kuthiwa wenze uphenyo olunzulu oluze lwagcina lumvezele ukuthi umfo-wabo wayekhavwe ngomshwale-nse ngumngani wakhe ngemali enkulu ayithola ngemuva kokuba eveze ukuthi sewashona.
“Sinezinsolo eziqinile zokuthi ukubulawa kakhe kuhlangene naleli cala, akuhlobene namate-kisi, ngoba kawukho umbango okhona futhi ubengeyena umu-ntu obegxile kakhulu emsebenzini wamatekisi. Kuyimanje icala lokunyamalala komfowabo no-muntu owathola izizumbulu ze-mali lisenkantolo.
“Umuntu osolwa ngokuthi wa-yemkhavile ubeseke wazama kaningi ukuncenga umufi ukuba asule icala, waze wamthembisa ukuthi uzomnika u-R100 000 ne-moto uma evuma ukulesula.
“Kuthiwa umufi ubeshaya pha-nsi ngonyawo ngalolu daba, ethi ufuna kwenziwe ubulungiswa ngento eyehlela umfowabo. Leli cala lokudliwa kwemali ngomfo-wabo kamufi lisenkantolo. Kuli-ndeleke ukuba lihlale futhi ma-duze,” kusho ilungu lomndeni.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile isigameko sokudutshulwa kubulawe owesilisa KwaNongoma.
Uthe amaphoyisa avule icala lokubulala, bekungakaboshwa muntu.
Previous articleUmisiwe u-Ace Magashule
Next articleInyosi nemizuzu yekhethelo noNdlunkulu